Le Versus: « Mahazo vahana ny sakafo tsy misy hena » | NewsMada
Le Versus: « Mahazo vahana ny sakafo tsy misy hena »
Mihamahazo vahana ny mpanjifa tsy mihinan-kena eto amintsika. Maromaro ny antony mahatonga izany, noho ny finoana, fa indrindra, noho ny fahasalamana sy ny fitaizam-batana. Anisan’ireo toeram-pisakafoana mbola vitsy mivoy izany ny Le Versus, eny Bel’Air, tantanin’izy mirahavavy, Rakotosalama Guenaëlle sy Randriantiana Tahirisoa. Dinidinika.
Gazety Taratra (-): Inona ny nahatonga anareo roa hanangana toeram-pisakafoana?
Rakotosalama Guenaëlle (*): Asa ataoko ny fikojakojana ny vatana sy ny tarehy fa tia ny tontolon’ny sakafo koa izaho sy ny rahavaviko. Izaho, tia hena be ary i Tahirisoa, tsy tia. Avy amin’izay ny nahatonga anay hanome tolotra karazany roa samy hafa ho an’ny mpanjifa. Ny iray, misy hena na “carte rouge” ary ny faharoa, “carte verte” ho an’ireo tsy mihinan-kena (végétariens). Nampidirinay ao anatin’ny sakafo arosonay ity faharoa satria tsapanay fa mihamaro ny mpanjifa eto amintsika tsy mihinan-kena, noho ny antony finoana, na noho ny fahasalamana na koa hikolokoloana ny vatana. Eo koa ireo tsy mbola nanandrana na nihinana izany sakafo tsy misy hena nefa ahahenoana tsiron-kena izany.
Mampiavaka anay koa, izahay ihany no manao ny sakafo fa tsy hoe efa vita avy any ivelany na ataon’ny olon- kafa.
Randriantiana Tahirisoa (**): Nifanojo ny fitiavanay mirahavavy mahandro sy mikarakara salafo satria nipetraka ela tany Frantsa i Guenaëlle ary izaho, nipetraka 10 taona tany Norvezy. Maro ny traikefa azonay tany ivelany, ary efa miroborobo be ny karazana sakafo tsy misy hena any ary fantatray fa mihamahazo vahana koa izany eto Madagasikara. Tsy voatery ho misy hena ny sakafo vao atao hoe matsiro nefa koa tsy mila ampiasaina akora simika.
-Ahoana ny fijerinareo ny hoavy sy ny mpifaninana?
** Malalaka ny tsena ary maro ny zavatra azo atao eto amintsika. Tsy maintsy manome zavatra sy tolotra miavaka sady tsara ny mpanjifa kosa anefa satria takin’ny fifaninanana izany. Mila atao tsara ny trano fandraisana, ny ao anatin’ny fisakafoana, ny fomba fandraisana olona, ny fahadiovana sy ny kalitaon’ny sakafo sy ny fampihaingoana ary indrindra, ny tsirony, tena ankafizany azy. Tsy lafo loatra koa anefa fa atao sahaza ny fahefa-mividin’ny mpanjifa.
*Hezahinay ny hanitatra ny tolotray, indrindra ny “carte verte”, ho an’ny tsy mihinan-kena any amin’ny toeran-kafa sy any amin’ny faritra. Dingana manaraka koa ny hamokarana karazan-tsakafo na tsakitsaky (snack) manokana anay, misy hena sy tsy misy, any amin’ny tranombarotra lehibe na toeram-pivarotana manokana.